Semalt: Inona no atao hoe spam-bot sy ahoana no hanakanana izany?
Raha niditra tao amin'ny kaonty Google Analytics ianao ary nahamarika tampoka teo amin'ny sehatra, ny vintana dia ny bots ary ny spam referral no nahatratra ny tranokalanao. Eo am-pijerena, mety hiteny ianao hoe hahatonga anao hivarotra sy hitarika izany, fa ny fandinihana akaiky kokoa amin'ny loharanom-pivoriana dia hanome anao ny hevitr'ilay fifamoivoizana. Ny Spambots dia tompon'andraikitra indrindra amin'ny fitohizan'ny tranokala marefo . Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, maro ireo webmasters no nitaraina fa ireo spam bots amin'ny finday dia mikapoka ny tranonkalany ary toa ny tena olona no nitsidika ny tranonkalanao. Ny SEO mainty hoditra sy ny sanda ratsy momba ny spam dia afaka mamela ny data Google Analytics ho an'ny ankamaroany. Ankoatra izany, miseho ireo bots ireo rehefa mitsidika ny tranokalanao imbetsaka izy ireo fa ny taham-pifaliana dia 100%. Tsy omena fampahafantarana tsara ianao, ary manomboka mihena isan-kerinandro ny toerana misy anao.
Inona no atao hoe Spam Bot?
Ny Frank Abagnale, ny Semalt Manager Success Manager, dia manazava fa ny bots dia programa maoderina izay manana fahafahana hamorona asa tsy misy fandraisana an-tanana. Ny bot dia tompon'andraikitra amin'ny fanatanterahana asa maro izay ahafahan'ny olona tena manatanteraka ora vitsivitsy, andro na herinandro. Ny bots dia mila segondra vitsivitsy hanatontosana asa marobe amin'ny fotoana iray ary noforonina hitsidika ny tranokalanao tsy mendrika.
Ny fahasamihafana eo amin'ny banga tsy ara-dalàna sy ara-drariny
Ny robots ara-drariny na tena izy dia an'ny motera karazana (Bing), Bing, Yahoo ary Google. Afaka manova ny tranokalanao izy ireo ary maneho ny pejy rehetra ao amin'ny valin'ny fikarohana . Ireo bots ireo dia tsy manisy ratsy ny tranokalanao amin'ny fomba rehetra, fa ny botsika tsy ara-dalàna dia natao hanimba ny tranokalanao..Tahaka ny nitsidihany ny tranonkalanao izany ary afaka mahita fomba fijery maro ianao, saingy tsy misy tranonkala izy ireo ary antsoina hoe sakana ratsy. Ny boom ankapobeny malaza sy malaza dia event-tracking.com, free-share-buttons.com, social-buttons.com, darodar.com, ary get-free-traffic-now.com.
Misy fahasamihafana manodidina ireo tranokala ireo, ary ny URL-nao dia hita ao amin'ny kaonty Google Analytics automatique. Raha manaraka ny URL -n'izy ireo ianao mba hahafantaranao bebe kokoa momba ireo orinasa sy ny famoaham-baovaon'izy ireo, dia mety hanimba ny tranokalanao izy ireo. Ohatra, raha mahita spam ianao (see-your-website-here.com) ao amin'ny kaontinao Google Analytics, tokony hanafoana azy haingana araka izay tratra ianao.
Ahoana no hanakanana botsa-pitenenana ao amin'ny kaontinao Google Analytics?
Saika ny mpitsoa-ponenana rehetra no hita ao amin'ny tranonkalan'ny fitsangatsanganana rehetra ary tokony hesorina tsy ho ela. Raha hitanao ny adiresy vaovao momba anao ao amin'ny kaontinao Google Analytics, dia tokony hosoloanao izany, fa ny tsy fisian'ity fepetra ity dia ny hitazomana ireo botsara ratsy hatrany hatrany. Midika izany fa haka ny loharanon'ny servero izy ireo ary hisy fiantraikany amin'ny haingam-pandeha eo amin'ny tranokalanao. Na izany aza, azo atao ny mampiasa ny tahan'ny .htaccess hanakanana ny tranonkala spam rehetra. Ilaina ny milaza fa ny rakitra .htaccess dia fomba mahery vaika hanakanana tranonkala iray mampiahiahy. Ny dingana voalohany dia ny mampiditra fehezanteny manokana ao amin'ny rakitra .htaccess anao. Raha toa ka tsy miasa tsara io rakitra io dia tokony hampidirinao ny rakitra hacia vaovao ao amin'ny fototry ny sehatra.
Fomba haingana sy mora hafa amin'ny fananganana spam bot dia amin'ny famoronana filaharana matevina ao amin'ny kaontinao Google Analytics. Midira ao amin'ny kaontinao ary kitiho ny tabilao Admin. Avy amin'izany, tokony handeha any amin'ny Manifitra New View ianao, ary eo ambanin'ny fizarana anaran'ny filazana, dia hahita bokotra Spam Free ianao. Eto dia mila tsindrio ny safidy New Filter ary aza hadino ny manondro ny sivana Source .